Ukuphupha ngemarten Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
I-marten sisihlobo se-weasel, sisidalwa esikrelekrele ebusuku. I-Sable akufuneki ibhidaniswe ne-mink, nangona i-mink ibonakala ifana nesable.
Xa kuziwa ekuzingeleni, i-marten inesakhono kwaye ikwanobuganga bokuzingela izilwanyana ezinkulu kunayo, iipropathi ezizenzele igama elibi, kuba ihlasela iinkukhu ebusuku kwaye ibulale enye okanye enye inkukhu.
Ngokungafaniyo nempungutye, uhlala efumana indlela, nokuba incinci kangakanani, kwaye oyise zonke iintlobo zemiqobo ukufikelela kwinjongo yakhe. Akathandwa esixekweni: apho simazi ikakhulu njengesitshabalalisi esiluma kwiintambo zeemoto okanye sibangele ububi kwi-attics. Ngaba i-marten liqabane elingathandekiyo?
Ukutolikwa kwephupha kuninzi okuthethayo malunga nale ntonga inobukrelekrele. Ukuba ibonakala njengophawu lwephupha, sinokukhupha izimvo ezilungileyo kuyo.
1 Uphawu lwephupha «marten» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «marten» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «marten» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «marten» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa kwephupha ngokubanzi kugxila kumzingeli-isela. Nabani na ophupha ngesali makajonge phambili. ukuphanga Lumka ukhusele igama lakho. Oku kungabhekisa kubantu abanomona kunye nabanye abantu abanesidima abathatha kakhulu bengakhange bacele nto, kodwa kunye nelahleko yothando okanye umlo kubudlelwane. Ngokukodwa ukuba iphupha libetha i-marten, uphawu lwephupha luthetha ukulwa kunye Iingxabanoezidla ngokubangelwa yintlebendwane. Ukuphupha akufuneki kunikezele kwintlebendwane nokuhleba.
Ngokwesiko, ukutolikwa kwephupha ubona umfanekiso wesali enobukroti njengophawu lwabasetyhini abafuna ukonakalisa iphupha, kodwa uphawu lwephupha lunokubhekisa kubo bobabini abesilisa. Mhlawumbi inento yokwenza nabantu abadinayo ekufuneka uchithe ixesha elincinci kunye nabo ukuze ungadinwa. Ukubona i-marten ephupheni kukwakhumbuza amaxesha okudinga. ndoloza kwaye ungachithi konke.
Ngokuchasene noko, uphawu lwephupha lunokutsalela ingqalelo kumacala ahlaselayo ephupha. Ke sisilumkiso sokuba ungangeni ukubawa ukwaphulukana. Umphuphi unokufuna ukuba nento ethile kwaye uya engacingeli ekufezekiseni injongo yakhe. Kuya kufuneka ubakhathalele ngakumbi abanye kwaye ungangeni kumdaka njengendlu yenkuku.
Ukuba iphupha liyabulala i-marten, inakho Imiqobo yoyise okanye uphephe ilahleko. Unokufumana imali ngoncedo lomnye umntu.
Uphawu lwephupha «marten» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwephupha okujolise kwengqondo, imarten imele ukubongoza kwendoda kunye namandla abalulekileyo. Oku kunokuba nefuthe elihle ngengqondo yokuba ukuphupha ngesibindi kuthatha imiqobo kuhlaselo. Uphawu lwephupha lunokusebenza njengesilumkiso: iphupha liyaphela ukuhlaselwa Isikhokelo kwaye sinokwenzakalisa abanye abantu xa usilele kulawulo. Endaweni yokuzicengezela kakhulu, kuya kufuneka uzame ukuzilawula ngcono.
Ngakolunye uhlangothi, i-marten indala okanye iyagula ephupheni okanye ukuba ilele, imele umnqweno wephupha lamandla ngakumbi okanye nangaphezulu. Ukuzibamba.
Uphawu lwephupha «marten» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya, i-marten imele ukoyisa imiqobo kwindlela yokomoya, ke ngoko umgaqo oyindoda.